CD ‘ilay sabotsy mihoson-drà’ | GAZETY_ADALADALA
CD ‘ilay sabotsy mihoson-drà’
Posted on 17/02/2009 by gazetyavylavitra
Zavatra tena nahazendana ahy androany ity entiko aminareo ity.
Efa andro vitsvitsy izay no nahitako olona mivarotra ireny CD momba ny zava-doza nitranga teny Ambohitsorohitra ireny. Tsy dia nahataitra ahy loatra ny fisiany, indrindra noho ny fahalalako fa piraty naka ny sarin’ny TV Plus no nanao azy. Misy koa sary avy amin’ny France24.
Efa tonga hatrany amin’ny faritany sy ny faritra rehetra ivelan’Antananarivo ireny CD ireny, tsy ela akory fa andro iray na roa taorian’iny zava-nitranga iny.
Fa tamin’ity androany ity, dia niditra ny trano niaraka tamin’y iray tamin’ireny CD ireny ny mpanampiko. Tsy manana fitaovana hamakiana azy hono izy any an-trano ka nentiny taty mba hojerena ilay izy. Dia rafitra nijery teo ny sasantsasany taminay tato an-trano.
Mialoha ny tena sary dia misy tononkalo mialoha ny zavatra rehetra, avy eo dia ireo sary avy amin’ny fahitalavitra TV Plus sns…no manaraka.
Akory ny hatairana rehefa hifaramparana ilay lahatsary nataon’ity ‘mpangalatra’ ity fa misy vitsivitsy tamin’ireo sary nentiny namaranana azy no sary nalaiko. Nisy ny efa nasiako copyright, kanefa nisy koa ireo tsy mbola voapetaka copyright dia efa voasinton’ « ireo/ilay mpangalatra ». Tsy nisy henatra kely akory fa dia naseho hatramin’ny copyright eo amin’ireo sary. Farafaharatsiny rehefa tsy te ho « wain » hoy ny fitenin-jatovo izay, dia mody notakonana ny anaran’ny tompon’ny sary.
Angamba mety ho isan’izay mpamaky ny gazetyavylavitra.wordpress.com ianao ‘mpangalatra’ sary io. Ary mety ho ‘fan’ mihitsy aza. Fa mba asio hajany kely ihany ny fanaovan-javatra, tsy zavatra mora ny nahazoan’ny sasany ireny sary ireny, nefa dia ianao no hitavana ny vidin’ny hasasaran’ny sasanyamin’ny vola Ar 1000 isaky ny CD. Mihevitra angamba ianao fa hoe anaty sahotaka izao ka sarotra ho an’izay tompon’ireny sary ireny ny hitondra ny raharaha eny anivon’ny OMDA? Fa angaha moa izy ity ka ho sahotaka mandrakizay no hiainana e? Ndeha ho eritreretintsika hoe hanao fanadihadiana ny TV Plus. Rehefa miakatra tsikelikely avy aty ambany (ireo mpivarotra manamorona ny tsenan’Analakely) ny raharaha, dia hihevitra ve ianaofa tsy ho tratra?
Dieny mbola tsy misy ny arakaraka r’inao, dia atsaharo miaraka amin’ny vava. Mampalahelo ihany mantsy amin’izao fotoana sarotra izao ny hihevitra anao any am-ponja. Sy ny hoe raofina ny fitaovam-piasana.
Misaotra anao ‘mpangalatra’ io na dia izany aza nanome laza ny anarana.
« Diabe hametraka minisitra hoe? Vaovao mafana (Source 97.6 FM) »
titi, on 18/02/2009 at 12:00 said:
Misaotra betsaka @ fampitana ny vaovao, ary indrindra ny sary. Dia tena liana mamaky isan’andro mihitsy ny tenako, na dia aty alavitra aty aza dia mba maharaka ny zava-misy any an-toerana. Saingy dia mampalahelo tokoa izany teotsain’ny sasany izany, @ resaka CD io, dia hihôty ny hasasaran’ny hafa fotsiny ve ? Tsy mety ka. Titi
ikalamako, on 18/02/2009 at 1:22 said:
hmmm – ny ratsy hoa tsy kely lalana ….
Tokinao, on 19/02/2009 at 1:59 said:
Misy dia te hitavana fotsiny ny hasasaran’ny hafa! tsss
Sady amin’izay, sary azo atao ho « tena sarobidy » satria saika nihatra tamin’ny ainao ny nahazoana azy!
lezama sahala, on 19/02/2009 at 5:51 said:
ratsy aloha ilay izy fa izahay taty moa tsy afaka mahita Tv Plus dia nindrana t@ izay manana satria ny Tvm tsa handefa mihintsy, sa za no tara ?
tess, on 19/02/2009 at 12:16 said:
loza koa izany an! ary tena malaky mihintsy amin’ny asa halatra…..
MANINONA raha somary faizina kely?
ikalamako, on 19/02/2009 at 3:59 said:
Madagasikara tokony handroso mihitsy fa mahay mi-debr be ny Malagasy, miketriketrika be mihtisy – saingy ampiasaina @ ratsy foana le ketrik’atidoha. Dômazy.
puissance, on 19/02/2009 at 7:14 said:
MAHEREZA E ! tsy hay intsony ty fa ny ratsy miha ratsy hatrany,na ho ela na ho aingana dia aza matahotra fa mbola ho tratra ihany zany e?eny na tena sarotra aza ny naka ireny sary ireny dia,atao ahona moa fa,mbola ho avy ny akana ny sariny any amponja araka nyn teninao
cutie, on 21/02/2009 at 12:07 said:
tsy misy azo ifanomezan-tsiny io ry avylavitra fa tsy maintsy betsaka foana ny mpananararaotra a lol.
Zao za vo nahita ny blogn’i avylavitra fa tsy mbola haiko tsara ny manaraka an’izy ty. bizz